अय्यूब6ERV-NE - अय्यूबले - Bible Gateway
अय्यूब 5अय्यूब 7
अय्यूब6Nepali Bible: Easy-to-Read Version (ERV-NE)
अय्यूबले एलीपजलाई जवाफ दिंदछ
6 तब अय्यूबले जवाफ दिएः
2 “यदि मेरो पीडाहरू ओजन गर्न सक्ने भएता
अनि मेरो सबै सङ्कटहरू तराजुमा जोखिन सक्ने भएता।
3 मेरो दुःख म यता समुद्रहरूमा भएका बालुवा भन्दा गह्रुँङ्गो हुने थियो।
यसैले मेरो वचनहरू अर्थहीन प्रतीत हुन्छ।
4 सर्वशक्तिमान परमेश्वरको काँडहरू ममाथि छन्।
मेरो आत्मा ती काँडहरूदेखि विषको अनुभव गर्दछु।
परमेश्वरका डरलाग्दा हतियारहरू मेरो विरूद्धमा लस्कर लागेका छन।
5 जब कुनै दुर्घटना घटेको छैन तिम्रो शब्दहरू भन्नलाई सजिलो छ।
जङ्गली गधाले पनि गुनासो गर्दैन जब त्यहाँ उसलाई खान घाँस छ।
अनि गाईले गुनासो गर्दैन् जब सम्म त्योसँग खाद्य हुन्छ।
6 नुन विनाको भोजनको स्वाद असल हुँदैन
अनि अण्डाको सेतो खोस्टाको कुनै स्वाद हुँदैन।
7 यस प्रकारको खाद्य खान अस्वीकार गर्छु।
यस्ता भोजनले मलाई अस्वास्थ पार्छ।
अनि तिम्रा कुराहरू त्यस्तै छन्।
8 “हाय! मैले जे मागें त्यो पाउँन सकूँ।
म कामना गर्छु मैले चाहेको जे छ परमेश्वरले दिनुहुनेछ।
9 म कामना गर्छु परमेश्वरले मलाई श्राप दिउन,
कोही अघि बढेर मलाई मारून्।
10 अनि यदि उहाँले मलाई मार्नुहुन्न भने म एउटा कुरामा आश्वासित हुनेछु।
म एउटा कुरामा खुशी हुनेछु।
अनेकौं पीडाहरू भए पनि मैले परमेश्वरको आज्ञा अमान्य कहिल्यै गरेको छैन।
11 “मेरो बल गयो यसैले मसित बाँच्ने आशा पनि छैन्।
म जान्दिनँ ममाथि के दुर्घटना आइपर्नेछ।
यसैले मसँग धैर्य पनि छैन।
12 म चट्टान जस्तो बलियो छैन।
मेरो मासु काँसको जस्तो धातुबाट बनेको होइन।
13 म सँग स्वयंलाई सहयोग गर्ने क्षमता पनि अब छैन।
किनभने मबाट सफलता जति लगियो।
14 “कुनै मानिस यदि सङ्कटहरूमा छ भने उसको साथी उसको निम्ति कृपालु हुनपर्छ।
यदि उसका साथी सर्वशक्तिमान परमेश्वरदेखि विमुख भए पनि कुनै मानिस आफ्नो साथीको लागि उद्धार हुनुपर्छ।
15 तर तिमी, मेरो दाज्यू-भाइहरू, उद्धार भएनौ।
म तिमीहरूमाथि आश्रित हुन सक्तिनँ।
तिमीहरू त्यस्ता खोलाहरू जस्तै हौ जुन कहिले काहीं मात्र बहन्छ।
तिमीहरू त्यस्ता खोला हौ जो पोखिन्छन्।
17 अनि जब ऋतु गर्मी र सूक्खा हुन्छ,
पानी बहन रोकिन्छ।
अनि खोलाहरू सुक्छन्।
18 व्यापारीहरू बाङ्गो टेडो मोडहरू पछ्याउँदै जंङ्गलमा हराउँछन्।
तिनीहरू विनाशतिर उक्लन्छन् र नष्ट हुन्छन्।
19 तेमाका व्यापारीहरू पानी खोज्न आउँछन्।
शेबाबाट यात्रीहरू पानी पाउँने पूर्ण आशामा आउँछन्।
20 तिनीहरू पानी पाइन्छ भनेर आशा गर्छन
तर तिनीहरू निराश हुन्छन्।
21 अहिले तिमीहरू त्यस्ता खोलाहरू जस्ता हौ।
तिमीहरूले मेरो सङ्कटहरू देखेर भयभीत छौ।
22 के मैले तिमीहरूलाई सहायता मागे? होइन।
तर तिमीहरूले मलाई आफ्ना सल्लाहहरू खुल्ला रूपमा दियौ।
23 के मैले तिमीहरूलाई भने, ‘शत्रुहरूबाट मलाई जोगाऊ?
निष्ठुर मानिसहरूबाट मलाई जोगाऊ?’
24 “यसैले अब, मलाई शिक्षा देऊ अनि म चूपचाप रहनेछु।
मलाई देखाऊ कि मैले के त्यस्तो गल्ती गरें?
25 ईमान्दार वचनहरू शक्तिशाली हुन्छन।
तर तिम्रो तर्कहरूको के मतलब छ।
26 जब एकजना निराशापूर्ण मानिसको शब्दहरू बतास झैं हुन्छन् भने
के तिमीहरू मेरा कुराहरूमा बहस गर्न सक्छौं भनी सोच्छौं?
27 तिमीहरूले च्याँखेसम्म थापेर ती चीजहरू जित्न खोज्दैछौ
जुन ती बाबु हीन नाबालकहरूका हुन्।
तिमीहरूले आफ्नै साथीहरूलाई बेच्नेछौ।
28 तर अब, दया गरेर मेरो अनुहारलाई ध्यान देऊ।
म तिमीहरू प्रति झूटो हुने छैन।
29 यसैले अब, आफ्ना विचारहरू परिवर्तन गर बेईमानी नगर सोचाइ परिवर्तन गर।
मैले कुनै गल्ती काम गरेको छैन।
30 म झूटो बोलिरहेको छैन।
अनि म झूटोबाट सही के हो जान्दछु।”